कोरोना भाइरस उत्पतिको रहस्यबारे पत्ता लगाउन डब्ल्यूएचओ टोली चीन जाँदै « News24 : Premium News Channel
कोरोना भाइरस उत्पतिको रहस्यबारे पत्ता लगाउन डब्ल्यूएचओ टोली चीन जाँदै
एजेन्सी, २० असार । विश्वलाई कोरोना भाइरसको महामारी बारे ढिलो जानकारी दिएको आरोप चीनमाथि लागेको छ । कोरोना भाइरस पहिले कहाँ फैलियो र यो मानवमा कसरी पुग्यो भन्ने रहस्यको अनुसन्धान गर्नका लागि अब विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक टोली अर्को साता चीन जान लागेको जनाइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको चीन कार्यालयले वुहान नगरपालिका स्वास्थ्य आयुक्तबाट भाइरल निमोनियाको बारेमा सूचना पाएको ६ महिनापछि डब्ल्यूएचओको टोली त्यहाँ जाँदैछन् । डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अडानोम गेब्रेयसियसले जनवरीमा चीनसँग यस्तो सहमति भएको बताएका छन् ।
जतिसक्दो चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोली चीन गएर महामारीको सुुरुआत र यसको संक्रमणलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने बताइएको छ। कोरोना महामारीको कारण विश्वमा ५ लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गमएका छन् । मृत्युको यो क्रम जारी नै रहेको छ ।
डब्ल्यूएचओका प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथनले न्यूज एजेन्सी एएनआईलाई यो भाइरसको सुरुवात बुझ्नको लागि गहन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।उनले भनेका छन्, “विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस भ्रमणको बारेमा चीनसँग कुरा गरिरहेको छ। महामारी र यसको संक्रमणको बारेमा बुझ्न एउटा टोली अर्को हप्ता चीन भ्रमण गर्ने जानेछन् ।”
उनले अगाडि थपे, ”अहिलेको आवश्यकता के हो भने त्यहाँ राम्रो अनुसन्धान हुनुपर्दछ। डिसेम्बर भन्दा अघि के भयो भनेर राम्रोसंग पत्ता लगाउनु पर्दछ। यो भाइरस जनावरबाट मानवमा कसरी सरेको हो भनेर पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको छ।”
के त्यहाँ त्यस्तो कुनै जनावर छ ? जसबाट मानवमा सार्ने माध्यम बन्यो वा यो सीधा चमेरोबाट मानिससम्म पुगेको हो भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ चाँडै आउने पनि बताए । जब टोली चीनमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गर्छ त्यसपछि धेरै कुराहरु प्रष्ट हुने छ ।
‘यो पनि सम्भव छ कि यो भाइरस सीधा आएको हुन सक्छ, त्यसैले अझै विस्तृत छानबिन आवश्यक छ, डा.स्वामिनाथन भन्छन, “चिनियाँ सरकारले डिसेम्बर ३१ मा वुहानबाट निमोनियाजस्तो महामारी फैलिएको रिपोर्ट गरेको थियो, चीनमा रहेको उनीहरुको कार्यालयले यो जानकारी जनवरी १ मा पाएको थियो । ’
डब्ल्यूएचओले यसपछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मेशिनरीहरूलाई यसबारेमा सचेत गराएको थियो ।